4:11 am - Sunday September 24, 2017
Home » Cayaaraha » Xulka Soomaaliya oo ka qeybgalaya Tartanka Kubadda Koleyga Zone V (SAWIRRO)
CAIRO: Tartanka Kubadda Koleyga Africa ee Soonka Shanaad [FIBA Zone V] oo ka furmay Shalay Caasimadda Qaahira ee dalka Masar ayaa waxaa ka qeybgalaya Soomaaliya oo Sanadkan uga qeybgalaysa Wiilal iyo Gabdho oo intooda badan laga soo xulay dhanka Dibadda (Qurbaha).
“Diyaargarow adag iyo dadaal badan ayay geliyeen Xiriirka Soomaaliyeed Kubadda Koleyga iyo Macalimiinta Qaranka sidii Tartankan looga soo qeybgeli lahaa, Ciyaaryahanadeena waa kuwo tayo wanaagsan waxaana rajeynaynaa in aan ka soo hoyino guul ay Soomaalida ku wada farxaan” Sidaas waxaa warbaahintan u sheegay Madaxa Wafdiga C/qani C/llaahi Hilowle (C/qani Jeenyo).
Ciyaarta ugu horeysa Maanta wiilasha Soomaaliya waxay kaga hor-imaanayaan Ugaandha Saacadda 17:00, Waxayna Qeybta B kuwada jiraan (Ugaandha, Soomaaliya, Burundi), Dhanka Gabdhaha waxaa ka qeybagalaya 4 dal oo kala ah Masar, Ugaandha, Kenya iyo Soomaaliya, Macalimiinta Wiilaasha C/qaadir (SHIIKHA), Daa`uud, Faarax Oday iyo dhanka Gabdhaha Sucaad C/laahi iyo Fartuun Cusmaan ayaa iyagu waxay tilmaamayaan inay Natiijo wanaagsan ka keenayaa Tartankan isla markaana Soomaaliya aysan ku cusbeyn Ciyaarahana Zone V oo ay kaalimo wanaagsan ka soo geli jirtay.
Dhanka kale Wafdi Ciyaaryahano oo ka tegay Magaalada Muqdisho oo isugu jiray gabdho iyo Wiilal ah oo loogu talagalay in ay biiriyaan Ciyaaryahanadii qurbaha ka yimid si Tartanka ay ugu wada qeybgalaan, balse nasiib-darada ayaa waxay noqotay inay garoonka diyaaradaha Magaalada Dubai ay ku Xayirnaadaan muddo 3 maalin ah, iyadoo la sheegayo in loo diiday dal ku galka (Visa) dalka Masar. Si kastaba Ciyaaryahanadan ayaa wararka ugu danbeeyay xaqiijinaya inay dalka dib ugu soo laabanayaan.
Ma`aha markii ugu horeysay oo ay Soomaaliya ka qeybgasho Tartanka Zone V ee AFROBASKET waxaana lagu tilmaamaa inay qeyb ka yahiin Xulalka Kaalimaha wanaagsan ka gala Tartankan, iyadoo Xiddigaha sanadkan ugu qeybgalaya Soomaaliya lagu tilmaamayo inay yahiin kuwii ugu tayo wanaagsanaa ee ay xulaan macalimiin magac iyo khibrad weyn ku leh Ciyaaraha Kubadda Koleyga Soomaaliya.
Filed in Cayaaraha Wararka
Faah Faahin: In ka badan 5 ruux oo ku geeriyootay qaraxii agagaarka Hotel Wehliye
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo si kulul u cambaareeyay qaraxyadii Muqdisho